Vanyori vakazvarwa muna Chikumi. Mamwe mitsara kubva kumabasa ake. | Zvazvino Zvinyorwa
Vanyori vakazvarwa muna Chikumi
Mune ino yechipiri uye zvisingaite kupisa masvondo maviri emwedzi wa june Ini ndinoongorora zvimwe vanyori avo vakaberekerwa mariri. Uye ini ndinosarudza imwe nhevedzano yemitsara Zvemabasa ake.
1 13 yeJune
2 15 yeJune
3 19 yeJune
4 21 yeJune
5 23 yeJune
6 24 yeJune
7 25 yeJune
8 28 yeJune
9 29 yeJune
1865. William Butler Yeats, Munyori weIrish, akahwina mubayiro weNobel muna 1923.
Iyi London yekunyongana. Dzimwe nguva ndinofungidzira kuti mweya yevakarasika inomanikidzwa kufamba mumigwagwa yayo nekusingaperi.
1910. Gonzalo rwizi Ballester, munyori wemabasa akakodzera se ari mufaro nemimvuri.
«Handidi kuti iwe ufare newe. Hapana munhu anofara, uye hatife takafara, kana pamwechete kana takaparadzana. Izvo hazvisi zve izvo ... Sezvo iwe uchifanira kutambura, zvirinani kutambura nemumwe munhu uye kuzvinyaradza iwe nekambani. Iwe haugone kuita zvakanaka wega. "
1763. Issa Kobayashi, (Yataro), munyori wechiJapan ane mukurumbira semunyori wehaiku, nhetembo dzechiJapan.
1947. Salman Rushdie. Ndima dzaSatani
"Pane chakange chakanganisika nehupenyu hwepamweya hwepasi ... Akawandisa madhimoni mukati mevanhu vaiti vanotenda muna Mwari."
"Hausi munyori nekuti iwe wakasarudza kutaura zvimwe zvinhu, asi nekuda kwenzira yavanotaurwa."
1935. Françoise sagan, French munyori uye playwright, musiki wemutambo Mangwanani kusuruvara.
«Unowana imwe pfungwa yakapfava yerudo. Izvo hazviite neakateedzana ekuzvimiririra kwekunzwa ... ndakafunga kuti ndozvakaita rudo rwangu rwese. Kamwe kamwe kekunzwa pamberi pechiso, chiratidzo, kutsvoda ... Nguva dzizere, pasina kubatana, ndizvo izvo zvese zvandairangarira zvakaderedzwa kuita. Ichi chimwewo chinhu… Rudo rwusingaperi, kutapira, kusuwa… Zvinhu zvausinganzwisise ».
1889. Anna Akhmatova, Mudetembi wechiRussia. Kutenderera kwake kwenhetembo kwakanzi Requiem, Mukurangarira vakaurayiwa naStalin, kusanganisira mwanakomana wake Lev, anoonekwa seunyanzvi uye mutero wenhetembo kukutambura kwevanhu veSoviet pasi peudzvanyiriri hwaStalin.
Senge mariro mushure mako kuenda kwangu,
Muimba yekurara ine rima vana vakachema,
Pamberi pemutsvene paive nekenduru yakanyauka.
Pamiromo yako kutonhora kwechiratidzo.
Rufu ziya ziya pahuma yangu handikanganwe.
Sezvo vakadzi Streliezki akazivisa
Pasi peshongwe dzeKremlin mhere yangu.
"Muusiku hunofadza, muchivande, kuti hapana munhu akandiona, kana ini ndakatarisa chero chinhu, ndisina imwe mwenje kana gwara kunze kweiyo yaipisa mumoyo."
1911. Ernesto Mugovera, Munyori weArgentina.
"Zvinosetsa, asi kurarama kunosanganisira kuvaka ndangariro dzenguva yemberi; Parizvino, pano pamberi pegungwa, ndinoziva kuti ndiri kugadzirira zviyeuchidzo zvine hungwaru izvo zvinombozondiunzira kushushikana uye kupererwa ».
1903. George Orwell, zita rekunyepedzera raEric Arthur Blair, munyori weBritish. Nhoroondo dzake mbiri dzinomiririra uye dzakakurumbira ndidzo Kumukira papurazi y 1984.
“Mumagariro edu, avo vanonyatsoziva zviri kuitika ndeavo vari kure nekuona nyika sezvazviri chaizvo. Muzhinji, pavanoziva zvakanyanya, ndipo pavanonyanya kuzvinyengera; nehungwaru hwavari, hushoma njere dzawo. "
"Mhuka dzekunze dzaive dzakatarisa nguruve uyezve murume, murume uye nguruve uyezve nguruve uyezve murume, uye vakatadza kuziva kuti ndechipi."
1712. Jean Jacques Rousseau, French munyori uye muzivi.
"Tsamba dzerudo dzinonyorwa kutanga usingazive zvekutaura, uye dzichipera usingazive zvakataurwa."
1867. Luigi Pirandello, Italian novel, theatre uye pfupi nyaya munyori. Akapihwa mubairo weNobel wemabhuku muna 1934. Mabasa ake anozivikanwa anosanganisira mutambo uyu Vatanhatu mavara mukutsvaga munyori.
"Vakadzi, sekurota, havana kumboita sezvawafungidzira."
1900. Antoine de Saint-Exupery, French munyori uye aviator, munyori wemabasa akadaro ane mukurumbira se The Little Prince.
«Heino chakavanzika changu: chete nemoyo munhu anogona kuona zvakanaka. Izvo zvakakosha hazvioneke nemaziso ".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vanyori vakazvarwa muna Chikumi. Mamwe mitsara kubva kumabasa ake.